Ihamba yodwa iGauteng - Barbara Creecy | isiZulu
Ihamba yodwa iGauteng - Barbara Creecy
Awalungile athutha abafundi eGauteng - Umbiko
UCreecy uyabazonda abamnyama: Sadtu
Yenze kahle kakhulu iGauteng ku-matric
Johannesburg - Abafundi baseGauten ebebenza umatikuletsheni ngonyaka ka-2012 yibona abathole imiphumela ephezulu ezweni lonke okungokwesibili eminyakeni emithathu, kusho uNgqongqpshe wezeMfundo uBarbara Creecy ngoLwesine.
"Baphumelele kahle kakhulu selokhu kwatholakala inkululeko. Imiphumela emihle selokhu kwasetshenziswa i-universal access to education," usho kanje ngesikhathi ememezela imiphumela yesifundazwe kamatikuletsheni ka- 2012 eWits University eGoli.
"Okubaluleke kakhulu, ukuthi lena imiphumela emihle hhayi nje ngokwezibalo zabaphasile kuphela kodwa nangendlela okuphaswe kahle ngayo."
Isibalo sabafundi abaphase iNational Senior Certificate (NSC) eGauteng sinyuke ngo-2.8% sisuka ku- 81.1% ngo-2011 saya ku-83.9% ngo- 2012.
UCreecy uthe imfundo kumele ibukwe njengento yesikhathi eside edinga amandla nokuzikhandla hhayi exhanyazelelwayo.
"Kulonyaka, u-71% wabafundi abaphumelele imaths uma kuqhathaniswa no-61% wango-2011. Izinga lokuphasa iPhysical Science linyuke ngo-10%, laya ku-70%.
Isikole iHoërskool Waterkloof ePitoli yisona esenze kahle kunazo zonke esifundazweni.
UCreecy uthe izikole zasemalokishini nazo ziyangokwenza kangcono..
"Kubafundi abathole u-100% kwi-Mathematics, abekho ngaphansi kwabayisithupha abafunda kwezasemalokishini. Izikole zasemalokishini zithole o-distinction abangu-7284, uma kuqhathaniswa nabangu-6109 bango-2011."